युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा पुग्ने सबै टिमको टुंगो लाग्यो, को-को पुगे? - ramechhapkhabar.com
युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा पुग्ने सबै टिमको टुंगो लाग्यो, को-को पुगे?
युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा पुग्ने सबै टिमको टुंगो लागेको छ। खराव मौसमका कारण रोकिएको भिल्लारियल र एट्लान्टाको खेल सकिएसँगै च्याम्पियन्स लिगको प्रि-क्वार्टरफाइनलको समिकरण पुरा भएको हो।
यस पटक सन् २००१ पछि बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणमा पुग्न सकेन। बार्सिलोना बाहिरिँदा ला लिगाबाट रियल मड्रिड, एट्लेटिको मड्रिड र भिल्लारियल अन्तिम १६ मा पुगे। नकआउट चरणमा पुग्न नसकेका बार्सिलोना र सेभियाले युरोपा लिग खेल्नुपर्ने भएको छ ।
युरोपियन च्याम्पियन र २०२० का फाइनलिस्ट चेल्सी र पीएसजीले समूह चरणमा दोस्रो स्थानमा रहँदै नकआउट चरणमा पुगेका छन्। अब च्याम्पियन्स लिगमा अन्तिम १६ को ड्र सोमबार स्वीट्जरल्याण्डको नियोनमा हुनेछ। जसबाट अन्तिम १६ मा कसको प्रतिद्धन्द्धी को भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
यी हुन् नकआउटमा पुग्ने १६ टोली
म्यानचेस्टर सिटी- समूह ए विजेता, पिएसजी- समूह ए उपविजेता, लिभरपुल- समूह बी बिजेता, एट्लेटिको म्याड्रिड- समूह बी उपविजेता, आयाक्स- समूह सी बिजेता
स्पोर्टिङ सिपी- समूह सी उपविजेता, रियल म्याड्रिड- समूह डी बिजेता, इन्टर मिलान- समूह डी उपविजेता, बायर्न म्युनिख- समूह इ बिजेता, बेन्फिका- समूह इ उपविजेता
म्यानचेस्टर युनाइटेड -समूह एफ बिजेता, भिल्लारियल- समूह एफ उपविजेता, लिल – समूह जी विजेता, रेडबुल साल्जवर्ग- समूह जी उपविजेता, युभेन्ट्स- समूह एच विजेता, चेल्सी- समूह एच उपविजेता
आर्मी र मनाङ फरक खेलमा उत्रँदै
एएफसी कप छनोटको सम्भावना बलियो पार्नका लागि दुई क्लब कतार एअरवेज सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको चौथो चरणको अलग अलग खेलमा शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । एएफसी क्लब लाइसेन्स प्राप्त नेपालका चार मध्ये दुई टोली मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब फरक खेलमा उत्रदैछन् । दशरथ रंगशालमा दिउँसो १:०० बजे सुरु हुने खेलमा मनाङले फ्रेन्ड्स क्लबको सामना गर्नेछ । आर्मीले दिउँसो ४:४५ बजे सुरु हुने खेलमा च्यासल युथ क्लबको सामना गर्नेछ ।
सातौं चरण सम्पन्न हुँदा लाइसेन्स प्राप्त ४ क्लबमध्ये अंक तालिकाको माथिल्लो स्थानमा रहने टोलीले सन् २०२२ मा हुने एएफसी कप छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । मनाङ, आर्मीसँगै साविक विजेता मछिन्द्र क्लब र एपिएफ फुटबल क्लबसँग मात्र एएफसी क्लब लाइसेन्स छ ।
बुधबार लिगको तेस्रो चरणको समाप्तीमा अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको मछिन्द्र र तेस्रो स्थानको मनाङको समान ७ अंक छ । आर्मी ५ अंकका साथ छैटौं स्थानमा छ भने अंकविहिन एपिएफ पुछारमा छ ।
गत सिजन मछिन्द्रसँग क्लब लाइसेन्स नभएकै कारण दोस्रो स्थानको आर्मीले एफसी कपको समूह चरणमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । त्यति बेला आर्मीसँग मात्रै क्लब लाइसेन्स थियो । यो वर्ष थप तीन क्लबले मापदण्ड पूरा गर्दै लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि क्लब संख्या ४ पुगेको हो ।
मनाङसँग भिड्दा फ्रेन्ड्स पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ । ३ खेलमा फ्रेन्ड्सले २ खेलमा बराबरी गर्दै २ अंक जोड्दै दसौं स्थानमा छ । आर्मीसँग भिड्नु अघि च्यासलले भने ३ खेलमा १ जित, १ बराबर र अर्को हार बेहोर्दै ४ अंकका साथ नवौं स्थानमा छ ।